စိတ်ဝမ်းတွေကွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ Facebook အုပ်စု | Myanmar Mobile App
Home Trending Enterprise စိတ်ဝမ်းတွေကွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ Facebook အုပ်စု
ဘရိုင်ယန် အက်တန်ကတော့ မတ်လတုန်းက သုံးစွဲသူတွေကို “#deletefacebook” လုပ်ဖို့အတွက် တွစ်တာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
WhatsApp ရဲ့ တွဲဖက်တည်ထောင်သူ ဘရိုင်ယန် အက်တန်ဟာ Facebook မှ သူ့ရဲ့ WhatsApp ကို ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ၂၂သန်းနဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မာတီဘီလျံနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ခုနှစ်မှာတော့ WhatsApp ကန ထွက်ခွာခဲ့ပြီး စီအီးအို ဂျန်ကိုအန်ကလည်း သြဂုတ်လမှာ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အက်တန်ထွက်သွားခဲ့ပေမယ့်လည်း Facebook stock ကို ဒေါ်လာ၈၅၀မီလျံ ရင်းနှီးထားခဲ့ပါတယ်။
Facebook ဟာ သုံးစွဲသူ၁.၅သန်းရှိတဲ့ messaging app လေးကို ငွေကြေးဖန်တီးမှုများနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကိုအန်နဲ့ အက်တန်ကတော့ Facebook က advertising model ကို ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို သုံးစွဲမယ့်အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Facebook CEO မက်ဇူကာဘတ်နဲ့ COO ဆန်းဘတ်တို့အကြား တင်းမာမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
“အကျိုးအမြတ်ကြီးရဖို့ သုံးစွဲသူဒေတာတွေကို ကျွန်တော်ရောင်းစားခဲ့တယ်” လို့ အက်တန်က Forbes ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ သဘောတူညီမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ နေ့တိုင်းရှင်သန်ခဲ့ရတယ်။”
Facebook ကတော့ ပြန်လည်ချေပတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
Cambridge Analytica အရှုပ်တော်ပုံပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ သုံးစွဲသူအချက်အလက်ပေါင်း ၈၇သန်းကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အက်တန်က “It is time. #deletefacebook.” ဆိုပြီးတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကိုဖျက်လိုက်ဖို့အချိန်ကျပြီလို့ တွစ်တာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အက်တန်ရဲ့ကွန်မန့်တွေအရတော့ Instagram ရဲ့ တွဲဖက်တည်ထောင်သူ ကယ်ဗင်ဆိုင်စရွန်းနဲ့ မိုက် ကရီဂျာတို့လည်း ထွက်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။ သူတို့ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဇူကာဘတ်ကို ပျာသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒေးဗစ်မားကပ်ဆိုတဲ့ Facebook ရဲ့ blockchain division ခေါင်းဆောင်ကတော့ အက်တန်ကို ပြန်လည်ချေပထားပါတယ်။ “ကိုယ့်ကို ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့ company ကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကို တွေ့နေရတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဟာကိုမှမထောက်၊ အဆင့်အတန်းမရှိလိုက်တာ”လို့ facebook post မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ “အဆင့်အတန်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ စံနှုန်းတောင် သူ့အတွက် အသစ်ထွင်ရမလိုပဲ။”
ဘရိုငျယနျ အကျတနျကတော့ မတျလတုနျးက သုံးစှဲသူတှကေို “#deletefacebook” လုပျဖို့အတှကျ တှဈတာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
WhatsApp ရဲ့ တှဲဖကျတညျထောငျသူ ဘရိုငျယနျ အကျတနျဟာ Facebook မှ သူ့ရဲ့ WhatsApp ကို ၂၀၁၄ခုနှဈမှာ ဒျေါလာ၂၂သနျးနဲ့ဝယျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ မာတီဘီလြံနာဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၇ခုနှဈမှာတော့ WhatsApp ကန ထှကျခှာခဲ့ပွီး စီအီးအို ဂနျြကိုအနျကလညျး သွဂုတျလမှာ ထှကျခဲ့ပါတယျ။ အကျတနျထှကျသှားခဲ့ပမေယျ့လညျး Facebook stock ကို ဒျေါလာ၈၅၀မီလြံ ရငျးနှီးထားခဲ့ပါတယျ။
Facebook ဟာ သုံးစှဲသူ၁.၅သနျးရှိတဲ့ messaging app လေးကို ငှကွေေးဖနျတီးမှုမြားနတေယျလို့ သတငျးတှထှေကျလာခဲ့ပါတယျ။ ကိုအနျနဲ့ အကျတနျကတော့ Facebook က advertising model ကို ကနျ့ကှကျခဲ့ကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သုံးစှဲသူတှရေဲ့အခကျြအလကျတှကေို သုံးစှဲမယျ့အတှကျကွောငျ့ပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး Facebook CEO မကျဇူကာဘတျနဲ့ COO ဆနျးဘတျတို့အကွား တငျးမာမှုတှဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ။
“အကြိုးအမွတျကွီးရဖို့ သုံးစှဲသူဒတောတှကေို ကြှနျတျောရောငျးစားခဲ့တယျ” လို့ အကျတနျက Forbes ကို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ “ကြှနျတျောရှေးခယျြခဲ့တယျ။ သဘောတူညီမှုတှလေုပျခဲ့တယျ။ အဲဒါတှနေဲ့ နတေို့ငျးရှငျသနျခဲ့ရတယျ။”
Facebook ကတော့ ပွနျလညျခပြေတာမြိုး မရှိသေးပါဘူး။
Cambridge Analytica အရှုပျတျောပုံပွီးသှားတဲ့နောကျမှာတော့ သုံးစှဲသူအခကျြအလကျပေါငျး ၈၇သနျးကို အလှဲသုံးစားလုပျခဲ့ကွောငျး ပျေါသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ အကျတနျက “It is time. #deletefacebook.” ဆိုပွီးတော့ ဖစျေ့ဘှတျကိုဖကျြလိုကျဖို့အခြိနျကပြွီလို့ တှဈတာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
အကျတနျရဲ့ကှနျမနျ့တှအေရတော့ Instagram ရဲ့ တှဲဖကျတညျထောငျသူ ကယျဗငျဆိုငျစရှနျးနဲ့ မိုကျ ကရီဂြာတို့လညျး ထှကျသှားကွောငျး သိရပါတယျ။ သူတို့ထှကျသှားတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဇူကာဘတျကို ပြာသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒေးဗဈမားကပျဆိုတဲ့ Facebook ရဲ့ blockchain division ခေါငျးဆောငျကတော့ အကျတနျကို ပွနျလညျခပြေထားပါတယျ။ “ကိုယျ့ကို ဘီလြံနာတဈယောကျဖွဈအောငျလုပျခဲ့တဲ့ လူတှနေဲ့ company ကို တိုကျခိုကျနတေဲ့သူကို တှနေ့ရေတယျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ ကာကှယျပေးထားတဲ့ဟာကိုမှမထောကျ၊ အဆငျ့အတနျးမရှိလိုကျတာ”လို့ facebook post မှာ ရေးသားထားပါတယျ။ “အဆငျ့အတနျးမရှိဘူးဆိုတဲ့ စံနှုနျးတောငျ သူ့အတှကျ အသဈထှငျရမလိုပဲ။”
Previous articleYouTube က iPhone XS နဲ့ XS Max အတွက် HDR Support ထည့်သွင်းပေး
Next articleNotch နဲ့ Dual Camera ပါတဲ့ တန်ဖိုးနည်း Honor 8C ကို ကြေညာတော့မည်